Indro Aho ho eo aminareo mandrakariva, Izaho no Làlana sy Fahamarinana ary Fiainana
Izaho no Làlana sy fahamarinana ary Fiaianana
Andeha anie halaintsika sary antsina kely fotsiny ny fiainantsika eto ambonin’ity tany ity e! Heritrereto hoe misy karazana làlana be dia be no hodiavintsika, toa ireo làlana eto ambonin’ny tany, izay tsimaintsy hodiavina. Ary ao anatin’izany no hisafidiananao izay làlana halehanao izany. Ny iray amin’ireo dia làlana tsara nefa tena hety sy tery, fa ny ankmaroany kosa dia migodana no sady malalaka, ary ireny dia mitondra antsika hoany amin’ny fahaverezana.
Mba alaivo sary antsaina kely anie hoe eny amin’ny kihon-dalana rehetra eny dia misy ireo mari-panoroan-dàlana na ny ata amin’ny teny vahiny hoe: “panneau”, ireny no manoro sy mampahafantatra sy fanoroan-dalana na tokony handeha amin’izany izy na tsia. Amin’ny làlana tsara sy marina dia ny momba an’i “Jesosy” no hitanao eny. “Jesosy no Làlaana”, “Jesosy no Fahamarinana”, “Jesosy no Fiainana”. Nefa misy ihany koa ireo làlana izay mitondra ny olona hoany amin’ny fahaverezana,
Koa meteza àry isika hijery tsara ny làlana izay haleha, aoka ho amin’ny làlana tsara sy marina, no hosafidiantsika dia ilay mitondra antsika amin’ny fiaianana mandrakizay. Ilay fiainana feno fiadanana, feno fifaliana, dia ilay fiaianana maharitra mandrakizay. Araka izay hitantsika ao amin’ny bokin’i Daniela 12: 2-3 “ Ary maro amin’izay matory ao amin’ny vovoky ny tany no hifoha: ny sasany ho amin’ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin’ny henatra sy ny latsa mandrakizay. Ary izay hendry dia hamirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra; ary izay mamerina ny maro hoamin’ny fahmarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay doria.” Izany no teny nambaran’Andriamanitra tamin’i Daniela mpanompony, koa raha mino sy mihaino ny tenin’Andriamanitra isika dia hahazo sy handova ilay fiainana mandrakizay.
Raha sendra nandeha teny an-dàlana Jesosy nampianatra ny olona dia nisy lehilahy iray nanatona Azy, izany dia hitsantsika ao amin’ny Matio 19:16-17 “... Ary indro, nisy anankiray anatona Azy ka ananao hoe: Mpampianatra ô, inona no tsara hataoko hahazoako fiainana mandrakizay? Fa hoy Jesosy taminy: Nahoana Aho no anotanianao ny amin’izay tsara? Iray no tsara; fa raha te hiditra any amin’ny fiainana hianao, tandremo ny didy.” Ary teo koa no nanambaran’i Jesosy ny didy folo izay tokony hotandrovintsika mandrakariva. Ka hoy koa Jeosy milaza ny momba izany fiaina mandrakizay izany, azaka izay hita ao amin’ny Matio 19: 28-30 “... Fa hoy Jesosy taminy: Lazaiko aminareo marina tokoa fa rehefa mby amin’ny fanavaoazana, ka hipetraka amin’ny seza findrianan’ny voninahiny ny zanak’olona, hianareo koa, izay nanaraka Ahy, dia hipetraka amin’ny seza fiandrianana roa ambin’ny folo ka hitsara ny firenen’Israely roa ambin’ny folo. Ary izay rehetra efa nahafoy trano, na rahalahy, na anabavy, na ray, na reny, na zanaka, na tany noho ny anarako, dia handray zato heny ka handova ny fiainana mandrakizay. Nefa maro izay voalohany no ho farany, ary izay farany no ho vialohany.” Koa raha tiantsika ry havana ny hahazo ny fiaianana mandrakizay, dia mila manana ny finona an’i Jesosy Kristy Tompo ho mpamonjy anao, raiso ho ao am-ponao, ao amin’ny fiaiananao manotolo; ampanjakao Izy. Mila miorina tanteraka amin’ny finoana isika, mahay misafidy ny làlana haleha ihany koa, mba tsy hahatonga anao hoany amin’ny fahaverezana. Fa Andriamanitra dia tiantsika, ary tsy mamela antsika ho very, ka izany no nanolorany ny zanany hamonjy antsika olombelona, araka izay hita amin’ny Jaona 3: 16 “Fa toy izao no notiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahitokana mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay.”
Tsy tian’Andriamanitra isika no ho very, fa mitady mandrakariva Izy ny hitodihantsika any aminy, nomeny ny mpanompony isika, dia ireo mpitory ny filazantsara, ireo mpitondra fiangonana isan-karazany. Fa izay mino an’i Jesosy Kristy no hovonjena, satria ny Kristianina dia ireo mpanara-dia an’i Kristy. Ilay zanak’Andriamanitra velona. Nisolo ny helotsika teo ambony Hazo Fijaliana, hoy ny Soratra Masina manambara izany, Jaona 3: 36 ”... Izay mino ny Zanaka manana fiainana mandrakizay; fa izay tsy mino ny Zanaka dia tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran’Andriamanitra no mitoetra eo aminy.”
Fa raha misafidy ilay fiainana faharoa dia, ny fiaianam-pahaverezana, izay tena migodana sy misy filibàna. Ary maro ankehitriny no mandeha amin’izany làlana izany; indrindra fa ny tanora, no tena voasarika betsaka amin’izany làlana izany. Ary tena mampalahelo mihitsy ny mahita azy ireo tafalatsaka ao anatin’ny fianana feno fahalotoana, ny fahotana, ao ireo tafiditra amin’ny fifohana zava-mahadomelina, ny fisotroan-toaka, ny fijangajangana; tiako hoarihina kely ny amin’izany, ny fanaovana firaisana ara-nofo alohan’ny fanambadiana dia fijangajangana izany. Ny tanora ankehitriny dia efa lasa fahazarana angaha raha izay no azo ilazana azy, ny fanaovana izany, efa lasa zary lamaody ankehitriny; ny ankizy vavy, misolosolo lehilahy iarahana, ny lehilahy moa dia ny hoe: kapaina tsy hita fery. Ka izany no mahatonga azy ireo manao fary mitety reny hoy ny fitenana malagasy. Nefa izany rehetra izany dia tsy sitrapon’Andriamanitra avokoa, fa avy amin’ilay ratsy dia devoly satana izany. Ilay mitaona olona maro hoany aminy. Koa aoka isika rehetra mba ho tonga saina avokoa ka hanaraka ny didin’Andriamanitra, ka handray izany ho sori-dàlana, jereo Jesosy ilay marika eny amin’ny làlana izay halehanao rehetra. Ialao ny fijejojejoana, ny fanompoan-tsampy, ny fidorohana zava-mahadomelina, ny fijangajangana, ny fahavetavetana rehetra manoloana ny maha tempolin’Andriamanitra antsika, araka ny voalaza ao amin’ny 1 Kor 3 16-17 “Tsy fantareo va fa tempolin’Andriamanitra hianareo, ary ny fanahin’Andriamanitra mitoetra ao anatinareo? Raha misy manimba ny tempolin’Andriamanitra, dia mba hosimban’Andriamanitra kosa izy; fa masina ny tempolin’Andriamanitra, dia hianareo izany.” Izay no teny nolazain’Andriamanitra, fa izay manimba ny tempolin’Andriamanitra, tsy ny fiangonana ihany no atao hoe tempolin’Andriamanitra, fa ny tenntsika tsirairay avy izao, raha jerentsika ny tenin’Andriamanitra teo dia misy ny atao hoe “Masina”, ny teny hoe: “Masina” dia voatokana, ka izany no mahasarotiny an’Andriamanitra amintsika olombelona.
Koa aoka àry isika ho samy sarotiny amin’ny tenany tsirairay avy, ka hitonbo hatrany amin’ny finoana , sy fanantenana ny fiainana mandrakizay, izay efa nampanantenin’i Jesosy Kristy; ary efa nampahafantariny hatrany izany fa Izy irery ihany no hany làlana ahatongavana amin’izany, koa manomboka anio àry dia raiso Jesosy ho Tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Sambatra izay mino nefa tsy mahita.